सुनकाे मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा, बन्याे नयाँ रेकर्ड
बुधबार, आषाढ २४, २०७७
Wed, Jul 8, 2020 at 4:44pm
काँग्रेस महासमिति सदस्य महेन्द्र मल्ललाई पार्टीले गर्‍याे ५ वर्षे कारवाही #आहा खबर# बुधबार पनि बढ्याे सुनको मूल्य, कति छ आजकाे बजार भाउ ? #आहा खबर# कैदीलाई पनि बिहे र प्रजनन अधिकार दिन माग #आहा खबर# मास्क नलगाई हिँड्ने ६४ जना पक्राउ #आहा खबर# डोनाल्ड ट्रम्पले शुरू गरे अमेरिकालाई डब्लूएचओबाट निकाल्ने औपचारिक प्रक्रिया #आहा खबर# आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीको विदाइ गरिँदै, शैलेश थापाले भोलिबाट कार्यभार सम्हाल्ने #आहा खबर# शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित नेकपा स्थायी कमिटी बैठक #आहा खबर# ओली-प्रचण्डबीच छलफल आज पनि, पाउला त स्थायी कमिटी बैठकले निरन्तरता ? #आहा खबर# ६१ हजार नगदसहित ८ जुवाडे पक्राउ #आहा खबर# वर्षाले धनगढीका अधिकांश बस्ती डुबानमा #आहा खबर# डोटीमा पहिरोले आठ परिवार विस्थापित #आहा खबर# नेपालमा सामसङले घटायाे मोबाइलको मूल्य, कुनमा कति घट्याे ? #आहा खबर# आज पनि नेपाली ल्याउन र लान ११ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने #आहा खबर# भोलिदेखि थप मनसुन सक्रिय हुने, बाढी पहिरोको समेत जोखिम #आहा खबर# सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै थपिए १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित #आहा खबर#
शुक्रबार, ३ श्रावन २०७६,	आहाखबर	19.35K
काठमाडौं, ३ साउन ।
शुक्रबार सुनको मूल्‍यले नयाँ रेकड कायम गरेकाे छ । आज सुन ताेलामा ५ सयले बढेर ६५ हजार ५ सय रूपैयाँ कायम भएकाे छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यावसायीका अनुसार छापावाला सुनको मुल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेर ६५ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मुल्य तोलाको पाँच सयले बढेर ६५ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो।
असार ६ गते सुनले ६५ हजार रुपैयाँको रेकर्ड बनाएको थियो। त्यस यता प्रतितोला ६४ हजार रुपैयाँदेखि ६५ हजार रुपैयाँको बीचमा कारोबार भइरह्यो। अघिल्लो एक हप्ता सुनको मूल्य स्थिर देखियो। हप्ताभरि सुन लगातार ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा मात्रै कारोबार भयो।
एक हप्तासम्म लगातार एउटै मूल्यमा कारोबार भइरहेको सुन हिजो बिहीबार ५ सय रुपैयाँ बढेर ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भयो। सुन हिजोको मूल्यमा फेरि ५ सय रुपैयाँ बढेर आज शुक्रबार अहिले सम्मकै उच्च मूल्यको नयाँ रेकर्डमा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
चाँदीको मूल्य तोलामा पाँच रुपैयाँले बढेर सात सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चाइना, भारत, इरान लगायतका राष्ट्रहरूसँगको विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै सुनको मूल्य बढेकाले यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यस्ताे छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
७ सयलृ घट्याे सुनकाे भाउ, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
प्रतितोला ५ रुपैयाँले बढ्यो सुनकाे भाउ, कति पुग्याे आज ?
झन्डै एक लाख पुग्याे सुनको मूल्य
ठमेलका व्यवसायीलाई घरबेटीले दिए भाडामा ५० प्रतिशत छुट
लगातार बढेकाे सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, कति पुग्यो आज ?
आज पनि वढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
प्रतिताेला ९० हजार नाघ्याे सुनकाे मूल्य
लगातार बढ्दै सुनकाे मूल्य, कति छ आजकाे बजार भाउ ?
सुनकाे भाउ अहिले सम्मकै उच्च विन्दुमा, कति छ आजकाे बजार मूल्य ?
काँग्रेस महासमिति सदस्य महेन्द्र मल्ललाई पार्टीले गर्‍याे ५ वर्षे कारवाही
बुधबार पनि बढ्याे सुनको मूल्य, कति छ आजकाे बजार भाउ ?
कैदीलाई पनि बिहे र प्रजनन अधिकार दिन माग
डोनाल्ड ट्रम्पले शुरू गरे अमेरिकालाई डब्लूएचओबाट निकाल्ने औपचारिक प्रक्रिया